जनशक्ति र सामग्री अभावबीच कोरोनासँग लड्दै कोशी अस्पताल – Health Post Nepal
२०७७ वैशाख १६ गते ८:४३
प्रदेश एकको राजधानी विराटनगरमा रहेको कोशी अस्पतालमा अहिले कोरोना संक्रमितको परिक्षण द्रूत गतिमा भइरहेको छ। त्यहाँ प्रदेश एकको मात्र होइन्, प्रदेश दुईको परिक्षण पनि भइरहेको छ।
जनकपुरमा रहेको आरडिटी मेसिनमा खराबी आएको भन्दै परिक्षण रोकिएपछि त्यहाँको परिक्षण पनि कोशी अस्पतालबाटै हुन थालेको छ। अहिलेसम्म उक्त अस्पतालमा ३ सय ९० को परिक्षण सकिएकोमा २२ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ।
कोशी अस्पतालको परिक्षणबाट पोजेटिभ देखिएका २२ जना र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा पोटेटिभ रिपोर्ट आएका ९ जना गरि त्यहाँ ३१ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ।
कोशी अस्पतालकी प्रुमख डा. संगीता मिश्रका अनुसार अस्पतालले अहिलेसम्म ३ सय ९० जनाको पीसीआर र आरडिटी मार्फत ९० जनाको परिक्षण गरिसकेको छ ।
उक्त अस्पतालमा उपचार भइरहेका उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका– ३ भुल्केको मस्जिद र मस्जिद आसपासमा रहेका लगायत अन्य छन्। आइतबार मात्रै झापाका एक व्यक्तिमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो।
‘अहिले उपचाररत सबैको अवस्था सामान्य छ। परिक्षणलाई तिब्रता दिइरहेका छौं’,
‘अहिले उपचाररत सबैको अवस्था सामान्य छ। परिक्षणलाई तिब्रता दिइरहेका छौं’, डा. मिश्रले भनिन्, ‘तर, यहाँ जनशक्तिको भने निकै अभाव छ। जसले गर्दा निकै समस्या भोग्नु परिरहेको छ।’ उनले आफूहरूले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग थप जनशक्ति मागिरहेको बताइन्।
एउटै अस्पतालमा दुई प्रकृतिका विरामीको उपचार गर्नुपर्ने र कोरोनाको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले पनि सात दिन काम गरेर १४ दिन काम गर्न नमिल्ने भएकाले समस्या भइरहेको डा. मिश्रको भनाई छ।
अन्य विरामीकै उपचारका लागि जनशक्ति अभाव भइरहको समयमा कोरोनाका विरामीको उपचार गर्नुपरेपछि निकै सास्ति खेप्नु गरेको उनको गुनासो छ।
केन्द्र सरकारले पठाउने भने पनि अहिलेसम्म जनशक्ति नपठाएको र प्रदेश सरकारले आठ जना मेडिकल अफिसर दुई जना नर्सिङ् स्टाफ गरि दश जना पठाएको उनले बताइन्। एक सिफ्टमा २६ जना चिकित्सक चाहिने र एक हप्ता उपचार गरे १४ दिनसम्म काम गर्न नमिल्ने भएकाले समस्या भोग्नु परेको उनको दुखेसो छ।
उनले चिकित्सकीय जनशक्ति मात्र नभएर ल्यावमा पनि प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको बताइन्। उनले यस्तै अवस्था रहे कम लोड रहेका जिल्लाका अन्य अस्पतालबाट पनि प्रदेश सरकारले त्यहाँ जनशक्ति खटाउनुपर्ने बताइन्।
कोशी अस्पताल विराटनगरको कोरोना परिक्षण प्रयोगसालामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू।
यस्तै ल्यावमा कार्यरत प्रणभ कुमार यादवका अनुसार पनि अहिले कतिपय अवस्थामा त तीन सिफ्टमै काम गर्नु परिरहेको छ। नतिजा चाडो दिनुपर्ने र कतिपय अवस्थामा काममको प्रेसर हुँदा तीन सिफ्टमै ल्याम चलाइरहेको उनले बताए।
उनी यस अघि उदयपुरमा कार्यरत थिए। क्लिनिकल माइक्रो बाइलोजिस्टसमेत रहेका यादवालई सरकारले कोरोना परिक्षणका लागि ल्याव प्रमुखको रुपमा उदयपुरबाट त्यहाँ खटाएको हो। उनले अहिले अटोमेटिक एक्ट्याक्सन मेसिनका लागि किटलगायत आवश्यक सामग्री सकिएकाले म्यानोअल एक्ट्याक्सनबाट जाँच गरिरहेको बताए।
‘कुनै बेला आजको स्याम्पलको भोली नै रिपोर्ट दिनुपर्ने भन्ने कुरा आउँछ’
अटोमेटिकले चाँडो रिपोर्ट दिने भए पनि म्यानोअलबाट काम चलाइरहेको बताए। आफूले अटोमेटिकका लागि केही दिनमा सामग्री प्राप्त हुने जानकारी पाएको उनको भनाई छ। उनका अनुसार अहिले दुई सिफ्टमा काम गरेर करिव दैनिक ७० जनाको परिक्षण भइरहेको छ।
उनी लगायत आरडिटी परिक्षणका लागि छ जनाको टोली खटिएको छ। छ जनाको टोलिलाई काम भ्याई नभ्याई छ। ‘कुनै बेला आजको स्याम्पलको भोली नै रिपोर्ट दिनुपर्ने भन्ने कुरा आउँछ’, उनले भने, ‘बढी संकास्पद भए हामी पनि चाडो गर्छौं। किनकी यदि कोरोना संक्रमित समाजमा कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ् चाडो हुन्छ।’ उनले उदयपुरको केसमा आफूहरूले तीन सिफ्टमै काम गरेर भए पनि आजको स्याम्पल भोली नै दिएको बताए।
Tags: उदयपुर, काेशी अस्पताल